यी हुन् सुकुमेलका फाइदा – Health Post Nepal
यी हुन् सुकुमेलका फाइदा
२०७५ असोज १८ गते १४:११
यसरी गर्ने मोटोपन नियन्त्रण र जीवनशैली व्यवस्थापन
मधुमेह छ ? मिलाउनुस् खानाको सन्तुलन
नेपाली भान्सामा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिने सुकुमेल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसले ग्यास्ट्रिकबाट रक्षा गर्छ, कोलेस्टेरोल तथा क्यान्सर नियन्त्रण गर्छ, मुटुसम्बन्धी समस्याबाट राहत दिन्छ र रक्तसन्चारमा सुधार गर्छ । यसका साथै यो दाँतसम्बन्धी रोग र मुत्रनली संक्रमणजस्तै सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस र गोनोरियाको उपचारका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । यो नपु‌सकता, यौन उत्तेजना नहुने र चाँडै वीर्य झर्ने समस्या पनि समाधान गर्छ ।
१ सय ग्राम सुकुमेलमा इनर्जी ३ सय क्यालोरी, कार्बोहाइड्रेट छ८ ग्राम, प्रोटिन ११ ग्राम, फाइबर २८ ग्राम पाइन्छ भने कोलेस्टेरोलको मात्रा शुन्य हुन्छ ।
यो भिटामिन र सुक्ष्मपोषक तत्वले भरपुर हुन्छ । यसमा नियासिन, पाइरिडोक्सिन, रिवोफ्लाभिन, थियामाइन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, कपर, आइरन, म्यांगनिज, म्याग्नेसियम, फोस्फोरस र जिंक पाइन्छ ।
कोलोरेक्टल क्यान्सर रोकथाम गर्छ
मुटुको रक्षा गर्छ
डिप्रेसन हटाउन सहयोग गर्छ
ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल रोग रोकथाम गर्छ
एन्टीमाइक्रोबियल तत्व पाइन्छ ।
पीडानाशक तत्व पाइन्छ
दाँतको समस्या समाधान गर्छ
दमको समस्या समाधान गर्छ
रक्तसन्चार सुधार गर्छ
घाँटी सुकेको र बान्तामा उपयोगी हुन्छ ।
पिसाबसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ
श्वासको दुर्गन्ध हटाउँछ
Tags: खानपान, सुकुमेल
चितवनमा १८९३ एचआइभी संक्रमित, १६ जनाकाे मृत्यु
‘घरभित्रको हावा ताजा राखे कोरोना संक्रमण जोखिम कम हुन्छ’
डा. गोविन्द केसी केही दिन अस्पतालमा रहने